Ingubo Bag Factory | I-China Garment Bag Abakhiqizi, Abahlinzeki
Abakhiqizi besikhwama se-non non woven suit suit suit protector with logo
Ikhwalithi ye-Premium eyenziwe ngezinto ezingalukanga ze-polypropylene, 100% Eco-Friendly & Kabusha
Ilungele ukugcina noma ukuhlelela izikhumba, ama-furs, ama-tuxedos, amasudi nezingubo.
Izinto eziphefumulekayo nezingenayo i-asidi yokugcina isikhathi eside - zivikela ekubunjeni
Isikhwama sekhava yesambatho esimhlophe esimhlophe, isikhwama sezingubo esigoqekayo sesudi
Izinto: Zenziwe ngezindwangu ezingezona ezelukiwe, ezilungele ukugcina nokusesha.Size: Kwenziwe ngentando (L * W * H)
Kuvikela izingubo: Kuvikela izingubo ekungcoleni, othulini, nakubhu, kugcina izingubo zihlanzekile.
Uziphu Design: Sebenzisa uziphu eside, kulula ukukhetha, futhi beka izingubo.Portable: Umthamo omkhulu, esiwusizo kakhulu, ukunakekelwa okuhle izingubo.
Intengo yefektri AKUKHO sikhwama sezingubo se-MOQ esinamaphakethe, isikhwama sokugqoka esikhwameni esenziwe ngokwezifiso
Isikhwama Sesembatho Eside: Lezi zikhwama zezingubo zezingubo ezinde zenziwe ngendwangu esezingeni eliphakeme yokuphefumula engenayo i-100GSM. Vikela izembatho zakho kumabhu nothuli, Gcina izingubo ziphefumuleke kahle futhi zihlanzeke epotimendeni, kumawodrobe, noma ezigumbini zokugcina impahla
Sula Iwindi: Iwindi elicacile lisusa ukuqagela kokuzama ukuthola ukuthi yini engaphakathi kwesikhwama sakho sengubo engama-intshi angu-60. Isiphathi sekhadi lePlastiki le-PVC lesikhwama sengubo sethegi legama noma ikhadi lokukhomba. Elula futhi Esindisa Isikhathi.
Ukotini wendwangu yengubo enelogo
1. Indwangu Eqinile Yokotini We-Canvas
2. Isitoreji semfashini
3. Kugeza amabala
4. Isitoreji esingenalo uthuli
5. Uziphu oqinile